Posted by မီးမီးငယ် at 3:06 PM
Anonymous January 16, 2014 7:25 PM
So Amazing Ma Mee Nage.
မီးမီးငယ် January 17, 2014 9:06 AM
You should go there with your son.
I am sure he will love there very much.
miss you..Ma Khine...
Anonymous January 17, 2014 3:55 AM
i always read ur post
မီးမီးငယ် January 17, 2014 9:07 AM
Thank you very much my dear anonymous reader..
Goldfish January 17, 2014 9:01 AM
အချားဟဲ တွေကတော့ တကယ့်ကို နမူနာ ယူစရာပါပဲ။ တော်တဲ့လူက တကယ့်ကိုတော်တယ်။ မတော်တဲ့လူ တွေကိုကျတော့ တော်တဲ့လူက အချင်းချင်း ကူညီ ကြတယ်။ phone interview ခိုးဖြေပေးတာ က အစ ပေါ့။ lol . IT field ထဲ မှာ လည်း သူတို့ပဲ။ Deli field ထဲ မှာ လည်း သူတို့ပဲ။ Hotel business ထဲ မှာ လည်း သူတို့ပဲ။ ရွှေဆိုင် လည်း သူတို့ပဲ။ ဟူး....
မီးမီးငယ် January 17, 2014 9:14 AM
ဒါရိုက်တာအဆင့်ကို သူတို့ လူမျိုးဘဲရှိတာ ..
ဘွဲ့ တွေလည်းA to Z ပါဘဲ..
လူငယ်မဟုတ်ဘူး ၆ဝ ကျော်လို့ ၇ဝ နီးနေပြီ..
အီးစံကွားတွေက ထမင်းဆိုင် take away မှာဘဲများတာ
ထိပ်ပိုင်းမှာသူတို့ လူဦးရေနဲ့ အချိုးအစားတွက်ရင်
နဲလွန်းတယ်..ခံယူချက်တွေ နှလုံးသားတွေ ကွာခြားကြတယ်လို့ 
San Htun January 18, 2014 8:18 PM
သွားလည်ချင်တာ အဲဒီကို..အာကာသကို စိတ်ဝင်စားတယ်လေ...ဗဟုသုတလည်းရ ရယ်လည်းရယ်ရ...လျှာရှည်တာတော့ ကိုယ်တွေ့ ..း)
မီးမီးငယ် January 19, 2014 8:31 PM
AMK January 22, 2014 7:12 PM
မိုက်စ်တယ် အန်တီမီးမီးရေ..တခေါက်တော့ ရောက်အောင်သွားလည်အုံးမယ်
မီးမီးငယ် January 23, 2014 4:23 PM